I-NextMapping | Isizukulwane Covid Nekusasa
IGeneration Covid nekusasa ……
Kukhona isizukulwane esisha edolobheni - iGeneration Covid yaso eyaziwa nangokuthi yiGen C. okubandakanya abantu abasha abangaphansi kweminyaka engamashumi amabili.
Kungenzeka ujwayelene ne- ezinye izizukulwane:
UGen Z 1997 kuya ku-2020 (yazi ngokuba yisizukulwane semithombo yezokuxhumana)
Millenials 1981 kuya ku-1996 (eyaziwa ngokuba yisizukulwane sobuchwepheshe)
UGen X 1965 kuya ku-1980 (owaziwa ngokuba ngukuqala kwesizukulwane sobuchwepheshe)
Ama-Zoomers (ama-Baby Boomers angafuni ukuguga) ngo-1946 kuya ku-1964 (owaziwa ngokuba yisizukulwane sangemva kwempi / senkululeko)
Ama-Traditionalists 1925 kuya ku-1945 (aziwa ngokuba yisizukulwane sempi)
Nakhu ucwaningo lokho kusanda kuqala ngomthelela wobhadane kubantu abasha abangaphansi kweminyaka engamashumi amabili owaziwa njengoGen C onyakeni odlule nohhafu.
Akungabazeki ukuthi umthelela kwezenhlalo ubhadane ku wonke umuntu isazokwaziwa ngokuphelele. Kuyathakazelisa kakhulu ukubuka futhi ubone ukuthi ulwazi lukaGen C nobhubhane luzokuguqula kanjani ukukhetha kwabo nokuziphatha kwabo ngekusasa.
IGeneration C ukuphela kwesizukulwane esisha esiphila kuso futhi esizobe siphila nobhadane eminyakeni yaso yokwakha neyokuthomba. Ngaphezu kwalolu bhubhane uGen C uye wabona ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana okwandayo ukungezwani ngokobuhlanga, ukungalingani ebuholini bukahulumeni, imiphumela yesifo ekufudumaleni kwembulunga yonke nokugxila okwandayo ebulilini bobulili.
Akunasidingo sokusho ushintsho lwezenhlalo oluzolethwa nguGen C luyoba olukhulu futhi luphazamise isimo esikhona. Kuzoba nezinguquko eziningi ezenziwe yiGeneration Covid nekusasa.
Ngokwe-anecdotally nginenqwaba yamakhasimende abelane ngeminye yemizabalazo ababona ukuthi izingane zabo ezincane zinayo ezinyangeni eziyishumi nesishiyagalombili ezedlule.
Ngizwile izindaba zezingane ezineminyaka eyisishiyagalombili ezinamabanga aphansi ezinamazinga aphezulu okukhathazeka ngenxa yokuthi zifundiswa online kuphela noma zibhekene nokuvulwa nokuvalwa kwezikole zazo njalo.
Izingane ezineminyaka eyishumi nambili zesikole zigqoke izifihla-buso (uma zisaya esikoleni) kanti ezinye azikaze ziye esikoleni isikhathi esingaphezu konyaka noma ezinyangeni ezimbalwa.
Intsha yesikole esiphakathi kanye neyasesikoleni esiphakeme kungenzeka ukuthi ibifunda kakhulu ku-inthanethi noma i-hybrid yesikhathi esithile ekilasini nangesikhathi esithile online.
Umthelela ongokwengqondo kubantu futhi ikakhulukazi abantu abasha wokuhlukaniswa emphakathini uzoba nomthelela omkhulu emashumini eminyaka alandelayo angalindelekile.
UGen C uzokwaziwa njengesizukulwane esiwumqedazwe esizoshintsha ikusasa ngokungenakuphikiswa.
Sisaqoqa idatha kanye nocwaningo ngemithelela yomphakathi yalolu bhubhane futhi sizobe sithola okuningi njengoba siqhubeka.
Ukuze siqale ukubheka umthelela wesizukulwane ngokuzayo kudingeka siqonde amandla amasiko afaka imizwa yabo, amanani abo, amathonya ezemvelo kanye nemibono yabo ebunjwe yimicimbi yenkathi yabo.
Mayelana nemizwa yeGeneration Covid, sibe nabazali abaningi ababika ukuthi izingane zabo zibhekene nemizwa eyinkimbinkimbi kulo lonke ubhadane olubandakanya:
Abazali babika ukuthi bakhathazekile ngobubanzi bemizwa eyinselele izingane zabo eziye zaba nayo kanye nomthelela wobhadane enhlalakahleni yezingane zabo zonke.
Kodwa-ke abazali babike nemithelela emihle yemvelo yalolu bhubhane kanye nomthelela walo ezinganeni zabo njenge:
Isikhathi esandisiwe somndeni ngenxa yokuthi abazali abahambi noma abahambi
Ukwazisa okwengeziwe ngezingane zokuchitha isikhathi ngaphandle nangokwemvelo
Intshisekelo eyengeziwe yezingane ukusungula nokuxhuma ngobuchwepheshe
Ukwanda kozwela nokuqwashisa okuzungeze abanye abantu
Ukugxila okwandisiwe kumanani wendabuko njengokuhlala phansi ekudleni
Ukukhulumisana okwandisiwe nokuxhumana ngenxa yokuba ndawonye
Amanani abumba zonke izizukulwane - uma ubheka uhlu olungenhla kwesizukulwane ngasinye lube namathonya alo abalulekile amasiko alolonge imibono yawo ngomhlaba.
Njengoba kunikezwe uhla lwemizwa eyinkimbinkimbi uGen C asezulazulile KANYE nokunikeza amathonya amahle ezemvelo kungaphepha ukuthola lezi zibikezelo ezilandelayo zeGeneration Covid nekusasa:
UGen C uzobona ukungabi nabulungisa ngokobuhlanga njengokudala futhi kungamukeleki futhi uzofuna ukukhokhelwa nezixazululo zekusasa.
UGen C uzobona ukungalingani ngokobulili nokungalingani njengokuphelelwe yisikhathi futhi okungenakuthenjwa futhi uzofuna ukuletha ukulingana nokulingana ngekusasa.
UGen C uzobona umsebenzi ngendlela entsha njengoba sebenabazali babo ekhaya ngesikhathi sobhadane ngakho-ke bazolindela ukuthi bazokwazi sebenza noma kuphi nanoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesithiyo.
UGen C kuzoba yisizukulwane lapho iningi labazali libuyele emuva lithuthele emaphandleni futhi lokhu kuzoholela ekutheni uGen C abe nokuxhumana okujulile nomhlaba ngakho-ke imvelo.
IGen C izoba nozwelo olujulile luphelele kubo bonke abantu futhi lokhu kuzodala idrayivu yokwenza umhlaba ube yindawo engcono ngezinkundla zokuxhumana.
UGen C uzokuqonda ngokujulile ukubaluleka kokuphila kahle ngokwengqondo kanye nempilo futhi lokhu kuzoholela ekutheni kugxilwe kwizixazululo ezandisiwe zentsha nabantu abadala ukwenza ngcono impilo iyonke.
IGen C izophokophela ukuthola imali engenayo eyisisekelo yokulwa nomthelela wokuguqulwa kwezobuchwepheshe ngama-robotics, i-blockchain ne-AI.
Angazi ngawe kodwa ngijabule ngomthelela uGen C azoba nawo esikhathini esizayo.
Engikwaziyo impela ukuthi izingane zami ezimbili ezinkulu ezinezinyanga ezinhlanu nezingu-16 zizohlala zithinteka yilo bhubhane nokuthi izingane zinamandla amakhulu.
Nginethemba elikhulu lokuthi ukuphazamiseka uGen C aphila kukho kuzobahlomisa ukuthi basisize sonke sakhe ikusasa elingcono.